Izigaba Eziyisihlanu Zama-Metric Wewebhusayithi Okufanele Uzihlolisise | Martech Zone
5 Izigaba Zama-Metric Ewebhusayithi Okufanele Uzihlaziye
NgoMsombuluko, Ephreli 13, 2015 NgoLwesibili, ngoJuni 16, i-2015 UJenn Lisak Golding
Ukufika kwedatha enkulu kulethe izingxoxo eziningi ezahlukahlukene eziphathelene analytics, ukulandela ngomkhondo kanye nokulinganisa ukumaketha. Njengabamakethi, siyakwazi impela ukubaluleka kokulandela imizamo yethu, kepha singakhungathekiswa yilokho okufanele sikulandele nokuthi yini esingeyona; yini, ekupheleni kosuku, okufanele ngabe sichitha isikhathi sethu kuyo?
Yize kunamakhulu amamethrikhi ngokoqobo okungenzeka ukuthi siwabhekile, kunalokho ngingakugqugquzela ukuthi ugxile ezigabeni eziyisihlanu zemethrikhi yamawebhusayithi futhi ukhombe amamethrikhi akulezo zigaba abalulekile ebhizinisini lakho:
I-WHO ivakashele iwebhusayithi yakho.
KUNGANI beze kusayithi lakho.
Ngenkathi lezi zigaba ezinhlanu zenza kube lula lokho esizama ukukala lapho othile eza kusayithi lethu, empeleni kuba nzima kakhulu lapho sizama ukukhomba ukuthi yimaphi amamethrikhi abalulekile nokuthi yimaphi angabalulekile. Angisho ukuthi akufanele unake izinhlobonhlobo zamamethrikhi, kepha njengakho konke okunye ekukhangiseni, kufanele sibeke phambili imisebenzi yethu yansuku zonke futhi, nokubika kwethu, ukuze sikwazi ukugaya imininingwane ezosisiza dala amasu okuguqula.
Amamethrikhi Esigaba ngasinye
Ngenkathi izigaba zizichaza kahle, amamethrikhi okufanele alandelwe emkhakheni ngamunye awahlali esobala. Ake sibheke izinhlobo ezahlukahlukene zamamethrikhi ngaphakathi kwesigaba ngasinye:
Ubani: Ngenkathi wonke umuntu ethanda ukwazi ukuthi ngubani ngempela ofike kusayithi lakhe, ngeke siluthole njalo lolo lwazi. Noma kunjalo, kukhona amathuluzi, afana nokubheka ikheli le-IP, angasisiza ukunciphisa ubukhulu. Inzuzo enkulu yokubheka kwe-IP ukuthi ingasitshela ukuthi iyiphi inkampani evakashele isiza sakho. Uma ukwazi ukulandelela ukuthi yimaphi ama-IP avakashela isayithi lakho, lapho-ke ususondele eduze kokukhomba ukuthi ngubani. Okuvamile analytics Ngokuvamile amathuluzi awahlinzeki lolu lwazi.
Kungani: Kungani umuntu efika kusayithi kungukuzithoba, kepha kunamamethrikhi wokubala esingawasebenzisa ukusiza ukunquma ukuthi kungani enjalo. Ezinye zazo zibandakanya: amakhasi avakashelwe, isikhathi esichithwe kulawo makhasi, izindlela zokuguqula (ukuqhubeka kwamakhasi abakuvakashele kusayithi) kanye nomthombo wokudlulisela noma uhlobo lomgwaqo. Ngokubheka la ma-metric, ungenza ukucabanga okunengqondo kokuthi kungani isivakashi size kusayithi lakho.
Kanjani: Ukuthi isivakashi sewebhusayithi sikutholile kanjani kungakhombisa i-SEM yakho noma imizamo yezenhlalo. Uma ubheka ukuthi izokutshela kanjani ukuthi imizamo yakho isebenza kuphi nokuthi ayisebenzi kuphi, kepha izokutshela nokuthi ukuthumela imiyalezo kuphumelele kuphi. Uma othile ekutholile kusesho lwe-Google futhi achofoza kusixhumanisi sakho, uyazi ukuthi okuthile ngolimi lwakho kubaphoqelele ukuthi benze kanjalo. Amamethrikhi ayinhloko lapha awuhlobo lwethrafikhi noma umthombo wokudlulisela.
Ini: Okubhekwe izivakashi mhlawumbe okuqonde kakhulu kulezi zigaba. Imethrikhi eyinhloko lapha ukuthi imaphi amakhasi avakashelwe, futhi empeleni unganquma okuningi ngalolo lwazi.
kuphi: Ekugcineni, lapho isivakashi siphume khona singakutshela lapho belahlekelwe khona intshisekelo. Bheka amakhasi okuphuma bese ubona ukuthi akhona yini amakhasi aqhubeka eza. Lungisa okuqukethwe ekhasini bese uqhubeka nokucija, ikakhulukazi uma kuyikhasi lokufika. Ngokuvamile ungathola lapho isivakashi siphume khona kulwazi oluvela kokuvamile analytics amathuluzi afana neGoogle Analytics esigabeni sendlela yokuguqula.
Ngabe ubheke ngasinye salezi zigaba futhi ulungisa okuqukethwe kwakho noma iwebhusayithi ngokususelwa kudatha ebuyayo? Uma uhlolwe ngokusebenza kwewebhusayithi yakho, kufanele ube njalo.
Tags: amamethrikhi wezibalomarketing kwangaphakathiamamethrikhi
UJenn Lisak Golding unguMongameli kanye ne-CEO yeSapphire Strategy, i-ejensi yedijithali ehlanganisa idatha ecebile ne-back-intuition enolwazi ukusiza ama-B2B brand ukuthi awine amakhasimende amaningi futhi andise ukumaketha kwawo i-ROI. Usomaqhinga owine imiklomelo, uJenn wasungula iSapphire Lifecycle Model: ithuluzi lokucwaninga elisekelwe ebufakazini kanye nohlelo lwezezimali zokukhangisa ezisebenza kahle.
I-Buzz, Viral noma iZwi Lokumaketha Ngomlomo: Uyini umehluko?